मन्त्रीले एसईईका केन्द्राध्यक्षलाई भने- तिमी खत्तम हेडमास्टर, कसले केन्द्राध्यक्ष बनायो? — Motivatenews.Com
मन्त्रीले एसईईका केन्द्राध्यक्षलाई भने- तिमी खत्तम हेडमास्टर, कसले केन्द्राध्यक्ष बनायो?
चैत्र ११ काठमाडौं- परीक्षा अनुगमनका क्रममा प्रदेश–२ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकलाई हप्कीदप्की गरेका छन्। मन्त्रीको यो कदमलाई अपमानको संज्ञा दिँदै शिक्षक आन्दोलित भएका छन्।
४ सय १० परीक्षार्थी रहेको सरस्वती मावि केन्द्रमा आइतबार ४ सय ८ जना सहभागी भए। प्रत्येक कोठामा चार जना घुम्ती र केन्द्राध्यक्ष गरी २३ जना गार्ड खटिएका थिए। शंकर दास, सीमाकुमारी कर्ण, विनिता यादव र बेचन राम चार निरीक्षक परिचयपत्रमा फोटो नटाँसी परीक्षा हलमा थिए। उनीहरू ढिला गरी परीक्षा केन्द्रमा पुगेकाले फोटो टाँस्न ढिलाइ भएको केन्द्राध्यक्ष मण्डलले बताएको अन्नपूर्णपोस्टमा खबर छ।